Västarvet somaliska - Public_Vastarvet
Västarvet – Västra waa hay’ada maamulka dabeecada iyo waxyaabaha dhaxal galka ah ee gobolka Götaland (Götalandsregionen)
Ku soo dhawoow in aad ka qayb qaadato hawlaha ay Västarvet qabtaan. Waxaa aan nahay maamulka ugu weyn ee xagga dabeecada iyo dhaxalka dabiiciga ah ee gobolada wadanka Iswiidhen oo dhan isla markaan waxaan qayb ka nahay gobolka galbeedka Götelan (Västra Götalandsregionen).
Hawlaha ugu muhiimsan ee ay qabato waa in dabeecada iyo dhaxalka dabiiciga ah ay ee ku yaala galbeedka Götelan (Västra Götaland) waa in aan ka dhigno kuwo nool isla markaana la heli karo. Waxaa aan ka shaqyn doonaa dhamaan 49 degmo ee uu gobolku ka koobanyahay isla markaana waxaan ka dhigi doonaa dabeecada iyo dhaxalka dabiiciga kuwo ka muuqan sawir ahaa iyo iyaga oo nool labadaba.
Matxafyada iyo goobo booqashada ku haboon
Västarvet waxaa ay gacanta ku haysaa lix goobood oo booqashaqa ku haboon oo ku yaala Gobolka galbeedka Götelang (Västra Götalandsregionen):
Warshada Forsviks (Forsviks bruk) waxaa ay ku talaa woqooyiga Karlsborg waana qayb ka mid ah assaaskii warshadaha Iswiidhen isla markaana leh taariikh dheer oo 600 oo sanno ah. Waxaa uu bandhigo ka hadli doonaa hawlihii lagu qaban jirey warshada muddadii ay jirtey oo dhan iyo dadkii degenaa isla markaana ka shaqeyn jirey halkan.
Matxafka taariikhda dabeecada ee Göteborg (Göteborgs naturhistoriska museum) waa matxafka ugu qadiimisan magaalada, isla markaa ka hadlaa sheekooyini ku saabsan xoolaha/xayawaanka iyo dabeecada, sidey noloshu ku bilaabatey, kala duwanaanta bay'ada nolosha iyo siyaabaha kala duwan ee ay u waaraan. Waxaa tusaale ahaan halkan yaala nibiriga biluuga (blåvelen) ee rakiban ee kaliya ee dunida jira, nibiriga Malmska (Malmska valen) iyo sidoo kale libaax Simba (lejonet Simba), qolfoofka xayawaan qiroweyn (dinosaurieskelett) iyo waxyaabo badan oo kale oo ku xiiso galin doona.
Matxafka Lödöse (Lödöse museum) waxaa uu ku yaalaa woqooyiga magaalada Götebo waxaa aad halkaas ka baran kartaa waxyaabo ku saabsan qarnyadii dhexe. Waxaa halkan yaala waxyaabo badan oo la heley qoditaanada lagu baadho waxyaabaha qadiimiga ah oo laga sameeyey Lödöse, waxyaabahaas halhaas laga heley waxaa tusaale ahaan ka mid ah kabo, qadaadiic, hub, calaamado xaj iyo waxyaabo la isticmaalo nolol maalmeedka.
Farsmada gacanta iyo daryeelka dhismaha (Slöjd & Byggnadsvård) Qasriga lagu magacaabo Nääs ee ku yaala degmada Lerums waxaa yaala xarun aqooneed oo diirad lagu saaro fasramada iyo waaritaanka/jiritaanka. Waxaa aad halkan ka heli kartaa talo bixin lacg la’aan ah oo ku saabsan sida loo daryeelo guryaha iyo dhimayaasha kale, maktabada buuggagta oo aad ka heli karto buggaag, bandhiyo aad booqato, koorsooyin waxbarasho ama tukaano aad ka adeegan karto qalabka farsamada gacanta iyo qalabka lagu daryeelo dhismaha.
Matxafka Vitlycke (Vitlycke museum) waxaa uu ku yaalaa goobta dhaxal galka aduunka ee Tanum ee ku yaala woqooyiga Bohuslän. Sawirada farshaxanka ah (Hällristningarna) ee ku yaala halka waa kuwo aduunka caan ka ah, waxaa kale oo waliba suurogal marka lagu dhexjiro matxafka iyo marka la joogo banaanka Bronsåldersgården in la dareemo marka sidii loo noolaa wakhtikhii maarta.
Matxafka Vänersborgs (Vänersborgs museum) waxaa yaala waxyaabo ka kala yimid meelo badan oo kala duwan oo dunida ka mid ah. Waxaad raaci kartaa markaad joogto halkan raadkii qanigii -1800finns, safaradii sahminta ee ay ka mid yihiin sanduuyada lagu keydiyo meydka faraaciinta ee wadanka Masar, Shimbiraha afrika, alaabta laga sameeyey dhoobada ee shiinaha, farshaxanka yurub, xayawaanada woqooyiga yurub iyo macaadanta.
Dhamaan goobahayaga booqashada waxaa lagu galaa lacag la’aan.
Västarvet waxaa kale oo uu ka shaqeeya sideedan meelood ee hoos ku xusan:
Barashada Arkeologi: Västarvet waxaa ay sameeyaan hawlaha baadhista waxyaabaha qadiimiga ah, tusaale ahaan baadhitaano, baadhitaano ku sabasanutför arkeologiska uppdrag, till exempel undersökningar, falanqeynta taariikhda dhaqanka mandaqada, daraasado hordhac ah iyo sharaxaada cawaaqiibta dabeecada ama bey’ada.
Daryeelek dhismayaasha: Saraakiisha hawlaha baadhista waxyaabaha qadiimaga ah ee Västarvet ayaa ka jawaabi kar wixii su’aalo ah ee ku saabsan caadooyinka dhismaha,qalabkaiyo habajka farsmada. Waxaa ay leeyihiin aqoon ku saabsan sida taxarka leh ee wax loo dayactiro, kaalmada dhaqaale ee daryeelka dhismaha, hubinta barnaamijyada wax ka qabashada, hubinta alaabta dhex taala guriga iyo waxyaabo kale oo badan.
Qasacadeyn (Konservering): Istuudiyaha Västsvensk ee wax qasacadeeya mgaalada qadiimiga (gamlastaden) ee Göteborg waa goobta wax lagu qasacadeeyo ee ugu weyn wadanka Iswiidhen. Waxaa ay ka caawiyaan in la qasacadeeyo isla markaana dib loo abuuro ama loo dhiso walxaha dhaqangalka taariikhiga ah, walaxaha la ururiyo si loo kaydiyo iyo bey’adaha, waxa kale oo ay ka qayb qaataan qorshe dajinta iyo istaraatijiyadaha sida loo maareyeyo ama loo daryeelo bey’adaha dhaqanka.
Bey’adaha dhaqanka (Kulturmiljö): bey’adaha dhaqanku waa qayb muhiima oo ka mid ah kaabayaasha gobolka – waxaa uu kanai ka qayb qaataa bey’ad lagu noolaado oo fiican isla markaana wuxuu abuuraa aqoonsi. Västerarvet siyaabo kala duwan bey uga shaqeeyaan dabeecada iyo bey’ada dhaqanka sida ilaha qorshaynta bulshada.
Degaanka dabiiciga ah (Naturmiljö): marka laga hadlayo deegaanka dabiiciga ah waxaa ay Västarvet ka shaqeeyaan arimaha ku saabsan mandaqada iyo qiimaha dabeecada iyo muhiimada horumarinta bulshada. Cilmibaadhayaasha Västerarv waxaa ay fuliyaan kortoroolo, go’aano shaqooyinka la qabanayo, waxaa ay bixiyaan talooyin isla markaana waxaa ay qaadaan saamiyaal/tijaabooyin Waxaa ay bixiyaan koorsooyin waxbarasho.
Barbaarinta iyo bandhigyada (Pedagogik och utställningar): Västarvet waxaa ay ka sameeyaan bandhigyo iyo barnaamijyo barbaarineed oo ku wareega dhamaan qaybaha kala duwan ee ka tirsan gobolka galbeedka Göteland (Västra Götaland). Hawlaha meheraduhu waxaa ay ku saleysan yihiin wada shaqeynta 49-ka degmo ee uu gobolku ka kooban yahay.
Farsamada gacanta (Slöjd): Talo bixiyaasha xagga farsamada gacanta guryaha ee Västerarvet waxaa ay bixiyaan talooyin, koorsooyin iyo waxbarasho, isbedelo iyo taageero horumarineed, bandhigyo, shabakad xidhiidh oo ku wajahan mandaqada gudaheeda, hadafku waa in la hormariyi fursada uu qof kaga qayb qaadan karo isla markaana la horumariyo faa’iidada iyo farxada ku jirta farsamada laga qabto gacanta.
Horumarinta iyo taageerada isbedelka (Utveckling och processtöd): Hawlaha horumarinta ee heer gobol ee ku wajahan arimaha dabeecada iyo dhaqanka la iska dhaxlo. Hamigu waa in la taaageero lana horumariyo mashaariicaga iyo meheredaha isla markaana la ahaado khayraad joogto ah oo gaadha dhamaan 49-ka degmo ee gobolka galbeedka Göteland (Västra Götaland) uu ka koobanyahay oo dhan.
Västarvet waa urur amar qaata siyaasiyiint isla markaana waxaa hawlaha ay qabtaan u dira gudiga waaxda dhaqanka iyo hidaha maamulka gobolka galbeedka Göteland (Västra Götalandsregionen). Si kastaba ha ahaatee ma go’aamiyaansiyaasiyiintu badhigyada lagu soo bandhigayo matxafyadama xakmaan bandhigayada ama tafaasiilaha kale, kaliya waxey u tilmaamaan jihada. Waxaa meherada lagu maalgaliyaa lacagta ka soo baxda cashuurtaut, dakhliga ka soo gala adeegyada ay bixiyaan, waxaa kale oo intaa u dheer lacagta ay ka helaan hawlaha ay u qabtaan hay’adaha ama shirkadaha kale ee aan ka ahaeyn Gobolka galbeedka götelanda (Västra Götalandsregionen).
Waxyaabaha la ururiyo
Västarvet waxaaay hayaan qiyaastii koob iyo toban milyan oo walxood oo ay ururiyeen.Waxaa ay isku jiraa kuwo alaabo digitaalaah, kuwo sawiro ah, iyo alaabo goobta yaala, tusaale ahaa lafo xayawaan iyo dhoobada laga soo guro marka la qodayo walxaha qadiimiga ah. Walxaha digaalka waxaa aad ku heli kartaa mataxka digitaalka.
cinwaanka: Vänerparken 13
cinwaanka boostada: 462 35 Vänersborg
phone: 010-441 42 00